Wallad Cabdalla oo ku eedeeyey Sh. Aways cinqilaab lagu afgambiyayo dawlada M/weyne Shariif. – Radio Daljir
Maajo 13, 2009 12:00 b 0
Adis Ababa ,May 13 | Wakiilka gaarka ah ee QM u qaabilsan Somaliya Axmed Wallad Cabdalla oo ka hadlay dagaaladii todobaadkan ka socday Muqdisho ayaa ku eedeeyey Sh .Xasan Dahir Aways in uu damabcsan cinqilaab lagu afgambiyo dawlada M/weyne Shariif.
Md. Cabdalla oo la hadlay saxaafada ayaa sheegay in imitaankii Sh. Aways ee Xamar uu ahaa mid uu ku doonayey in uu ku afgabiyo dawlada Somaliya ee sharciga ah, uuna kula wareego awooda dawlka.
“Dagaaladii ka dhacayey Muqdisho maalmihii la soo dhaafay, waxaa ay ahaayeen isku day cinqilaab.” ayaa uu yiri.
Muqdisho ayaa todobaadii la soo dhaafay waxaa dagaalo xoogani ay ku dhex mareen ciidamo taageersan Al-Shabaab iyo Maxaakimta oo la sheegay in ay taabacsan yihiin dawlada M/weyne Shariif.
Ururka Al-Shabaab ayaa marar badan sheegay in aanay taageersanayn dawlada federaalka ah ee Somaliya, oo sida ay sheegeen aan awayn mid sharci iyo xalaal toona ah.
Md. Cabdalla oo ka hadlay weerarada Al-Shabaab ee fariisimada ciidamada Maxaakimta ayaa sheegay in Al-Shabaab aanay awood u lahayn in ay afgabbiyaan dawlada Somaliya, haddii ay karaana ay mar hore la wareegi lahaayeen Muqdisho.
Waxaa uu ku tilmaamay Al-Shabaab in ay yihiin dablay maxaysato ah oo aan itijaah siyaasadeed iyo mid diimeed toona aan lahayn, balse ujeedada dagaalkoodu ay tahay mid dhaqaale/ganacsi oo ay uga gol leeyihiin in ay ku ilaashaan dahahooda dhaqaale.
Dagaalada Muqdisho ayaa uu ku tilmaamay kuwa ay isaga soo horjeedaan jabhad iyo dawlad sharci ah oo sida uu sheegay aan awood lahayn, balse u baahan in la taageero.
Ramtane Lamamra, Guddoonka Amniga ee AU-da oo isna ka hadlay dagaalada Muqdisho ayaa sheegay in Al-Shabaab ay soo weerareen fariisimo ay leeyihiin ciidamo taageersan dawlada Somaliya, lana jabiyey Al-Shabaab, xaaladuna ay iminka degan tahay, dawladuna ay badi magaalada gacanta ku hayso.
Midawga Afrika iyo QM ayaa si wadajir ah u dhaleeceeyey dagaalada ka socda Muqdisho oo ay sheegeen in ay raad weyn ku leeyihiin Al-Qacida.
Sh. Aways oo maalimihii la soo dhaafay ku sugnaa Muqdisho, is badanna ay fadhi u ahayn Asmara, loona tiriyo in uu yahay madaxada urur diimeedyada ka dagaalama gobollada Koonfureed ee Somaliya, ayaan marna taageerin dawlada federaalka ah ee Somaliya, marar badanna sheegay in uu dagaal ka xigo taageerida dawlada M/weyne Shariif.
Xisb al Islaam, Al-Shabaab, Alhu Sunna wal Jamaaca, Maxaakimta iyo kuwa kale ayaa ka mid ah urur diimeedyada ku loolamaya dagaalada ka socda Koonfurta Somaliya.